Kugadzira pamwe nekopiraiti | Martech Zone
Izvi, pamwe, imwe yeiyo nhaurirano dzakanakisa dzemitemo yekodzero (IMO) haisi kungoita zvisina tsarukano, asi zvakare bane kune hunhu hwetsika yedu. Kurwadziwa kunokonzerwa nemitemo iyi kunowedzerwa nekuputika kwemukana watinowana neInternet. Kunyangwe chinotapira ndechekuti meseji uye nhoroondo zviri kukurukurwa pano na Larry Lessig, gweta.
Hat muromo kune Lorraine yeiyo tsvaga!
Tags: mutsaoptimizationfambawongororo dzekufambakunyora
Jul 12, 2008 pa 1: 20 AM
Hongu, ndinoda mharidzo yake. Somuenzaniso, ndinoverenga Yemahara Tsika makore anoverengeka kumashure, uye ndakanzwa kurwadziwa kwake zvikuru. Zvakadaro, nehembe dzese dzakatengwa nekubhadhara dzatinadzo mukongiresi handina tarisiro yekuti zvinhu zvichashanduka mune ramangwana. ;-(
Jul 12, 2008 na3:25 PM
Isu tine dambudziko munyika ino umo kodzero dzebhizinesi dziri kudarika kodzero dzemunhu.